ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: File တွေကို Picture မှာ Hide နည်း How to Hide file in picture
File တွေကို Picture မှာ Hide နည်း How to Hide file in picture
ကျွန်တော်ညီ တစ်ယောက် ( သူ့အစ်မ ပေးမယ်ပြောလို့ ) ပြောလို့ တင်ပေးလိုက်တာ.။ အတော်များများလဲ တင်ပြပေးခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ မြန်မာ ဆိုဒ်တွေ အတော်များများလည် တင်ပေးခဲ့လောက်ပြီးလို့ ထင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ညီလို မသိတဲ့ သူတွေလည် ရှိအုံးမယ်လို့ ယူဆတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်ညီကို ပြောပြရင် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ပါ အသေးစိတ်ရေးပေးလိုက်တယ်။
WinRar Software လိုအပ်ပါတယ်။ မရှိက ဒီမှာ Download ချပါ။
Hide ရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း
1. My computer >> C:\_ ထဲမှာ New Folder ဆောက်ပြီး file လို့ Rename ပေးလိုက်ပါ။ ( မိမိကြိုက်တဲ့ Partition မှာ ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကC ထဲမှာလဲ လုပ်လိုက်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ Folder ထဲမှာ မိမိ hide မည့် ဖိုင်ကို WinRAR Software သုံးပြီး War သို့မဟုတ် Zip နဲ့ ချုံလိုက်ပါ။ )
2. မိမိ ဖိုင်ကို hide တဲ့ အခါမှာ အသုံးပြုမည့် ပုံကို မိမိတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ File ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ။ အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ။
အထက်ပါ အဆင့်တွေ ပြင်ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အောက်ပါအတိုင်း အဆင့်ဆင့် လုပ်ဆောင်ပါ။
1. Start >> Run >> cmd လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ.
2. Cd\_ လို့ရိုက်ပြီး Enter ထပ်ခေါက်လိုက်ပါ။
3. C:\_> မှာ cd file လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။
4. C:\_ file > မှာ copy /bText.jpg +secret.rar moehtet.jpg လို့ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ။ ခဏ စောင့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ကျွန်တော်တို့ File ကို hide ပြီးသာ ဖြစ်သွားပါပြီ။ (မှတ်ချက်။ ကျွန်တော်တို့ copy /bနောက်က ရိုက်တဲ့ Text.jpg ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မိမိ ဖိုင်ကို Hide တဲ့ အခါမှာ သုံးမည့် ပုံရဲ့ File Type ကိုရိုက်ရပါမည်။ ကျွန်တော် အသုံးပြုမည့်ပုံက jpg အမျိုးအစားဖြစ်လို့ Text.jpg လို့ ရိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ + secret.rar က ကျွန်တော် က rar ဖိုင်အမျိုးအစားနဲ့ ချူံခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ Zip နဲ့ ချူံ ခဲ့ရင် recret.zip လို့ ရေးရပါမည်။ moehtet.jpg ကတော့ မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ Neme ကို ရိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ.။။။။ nora.jpg လို့ဘဲ ရိုက်ရိုက် ပေါ့။ ) အောက်က ပုံကိုကြည့်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ရှင်းသွားပါမည်.။
အထက်ပါအတိုင်းလုပ်ပြီး သွားရင်တော့ hide ပြီးသွားပြီ ဖြစ်လို့ Text.jpg နဲ့ Secret.rar ကို Delete လုပ်လိုက်ပါ။ moehtet.jpg ဘဲ ချန်ထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် moehtet.jpg ကို preview နဲ့ဘဲကြည့်ကြည့် Double click နဲ့ဘဲ ကြည့်ကြည့် ပုံဘဲ တွေ့ရပါမည်. မိမိ hide ထားတဲ့ file ကို မတွေ့ရပါ.။ မိမိ hide ထားတဲ့ ပုံကို တွေ့ချင်ရင်
မိမိ hide ထားတဲ့ ပုံပေါ်ကို Right click ထောက် ပြီးရင် open with >> WinRAR Arhiver ကို click လိုက်ပါ။
WinRAR Archiver ကို နိုပ်လိုက်တာနဲ့ အောက်ပါအတိုင် မိမိ hide ထားတဲ့ ပုံကို တွေ့ရပါမည်..။ ပြီးပါပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ မရှင်းလို့ မေးမယ်ဆိုရင် iamcleverlion@gmail.com မှာ ဆွေးနွေနိုင်ပါတယ်။